जरो किलो महाअभियान र यसको अपरिहार्यता - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
भर्खर मात्रै पुस २७ गते पृथ्वी जयन्ती तथा एकता दिवस केही नेपालीले देशभित्र अनि बाहिर पनि धूमधामसँग मनाए । त्यसैगरी जनवरी १ लाई टोपी दिवसका रुपमा पनि मनाए । टोपी नेपालीको पहिचान थियो भने पुस २७ गते एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्ती । त्यसैले अहिले नेपालीले आफ्नो जरो पक्रिएर पृथ्वी जयन्ती तथा एकता दिवस मनाएका हुन् तर नेपालमा सरकारी तहमा यससम्बन्धी कुनै कार्यक्रम किन भएन ? पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर नेपाल नबनाएको भए के आज हामी नेपाली हुन पाउँथ्यौं र ? किन आज पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झन कन्जुस्याइँ गरेका छौं हामीले ? के उनी राजा हुन् भनेर ? राम्रो कामका लागि चाहे राजा हुन् या रैती वा जोगी आखिर उनी नेपाली नै हुन् । राजाकै कारण हो भने भगवान गौतम बुद्ध पनि त कुनै जमानाका हाम्रै लुम्बिनीका राजा थिए । के उनलाई पनि हामी नसम्झने ? हाम्रो यस्तै पनले गर्दा शान्तिका प्रतीक भगवान बुद्धलाई पनि नेपालका होइनन् भन्न थालिसके अरुले ।
पहिले युगौंयुगदेखि मनाइआएको एकता दिवस र त्यो दिन बिदा दिने चलन अहिले आएर किन एकाएक रोकियो ? किन अहिले हामीले आफ्नो धर्म, जाति, भाषा र संस्कृतिलाई छोड्दै अरुको धर्म, भाषा र संस्कृतिलाई अपनाउँदै आएका छौं ? तर, अरुले हाम्रा तिनै संस्कृत र वेद गीता आदिको ग्रन्थबाट विज्ञानका ठूल्ठूला आविष्कार गरेका कुराहरु अवमूल्यन गरी फेरि हामी त्यसैलाई अपनाइरहका छौं । हामीले आफ्नो जरो पक्रेर त्यसको उत्पत्ति र स्थान अर्थात् किलो र थलो किन नखोज्ने ? यिनै विषयको अनुसन्धान गर्नु र त्यसलाई अपनाउनु नै हो जरो किलो महाअभियान ।
हामीसँग के कमी छ ? खोज्नु मात्र जान्नुपर्छ र यसलाई युगअनुसारको वैज्ञानिक र विकसित गर्दै लैजानु पर्छ । हामीसँग संसारकै पुरानो वैदिक सनातन धर्म संस्कृति छ, संसारकै सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ वेद गीता छ । संसारकै ज्येष्ठ भाषा संस्कृत लगायत अरु सहायक भाषा छन् ! थुप्रै जनजाति र पेशाकर्मी छन । भरिपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा छ । हामीसँग धेरै कुरा छ । त्यसैले अब हामीले आफ्नो राज्य व्यवस्था पनि देश सुहाउँदो मौलिक रैथाने राज्य व्यवस्था बनाउनुपर्छ । अब नेपालीले आफ्नो पहिचान खोज्ने बेला आएको छ । हाम्रो देशभित्र युगौंयुगदेखि भएको हाम्रो धर्म, भाषा, जाति, संस्कृति र आफ्नै पनलाई विकसित र वैज्ञानिक गर्दै अगाडि बढ्यौं भने मात्र हाम्रो संसारमा उच्च सम्मान र हामी विकसित हुनेछौं र हाम्रो पहिचान रहनेछ । अन्यथा हामी हाम्रो नेपाल र पछि नेपाली दुवै गुमाउने छौं ।
पृथ्वीनारायण शाहले नै भनेका थिए – नेपाल एउटा चार जात ३६ वर्णको सिंगो फूलबारी हो । त्यसैले नेपाल कुनै एक जातजाति वा जनजातिको कुनै एक वर्ग विशेषको मात्र देश नभएर विविधताहरुको समिष्ट रुप हो तापनि ती सबैको संयोजन भइसकेर एउटा राज्य राष्ट्रका रुपमा विकसित भइसकेको हुँदा सम्पूर्ण जाति समुदाय, सारा भाषिक समुदाय, सबै धार्मिक समुदायको सहभागिताबाट निर्मित सिंगो नेपाल हो र यसप्रति इमानदार रहनु नै राष्ट्रियता हो । नेपालमा रहेका प्रत्येक जातीय समुदायप्रति राज्यको दायित्व समान छ र प्रत्येक जातीय समुदायको राष्ट्रप्रतिको दायित्व पनि समान छ । नेपाल सृष्टिकालदेखि नै सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता भएको हिमवत खण्डको देश हो । हाम्रै पुर्खाहरूले यो देशको माटो र समाजमा सुरू गरेका र आफ्नै सांस्कृतिक, मौलिकता र सभ्यता भएका मौलिक रैथाने धार्मिक, सांस्कृतिक समुदायहरू हाम्रा जीवन्त परिचय हुन् । बौद्धिक सनातन हिन्दू, बौद्ध, मुन्धुम (किराँत), जैन र बोन्पो साथै अन्य प्रकृतिपूजक समुदायको उद्गम स्थल अर्थात् जन्मभूमि नेपाल भएकोमा हामी गर्व गर्दछौं । यी धर्म, संस्कृति र सभ्यता नेपालबाट मासिए भने यिनको जाने ठाउँ कहीँकतै छैन । यिनको जरो किलो उखेल्ने प्रयास भइरहेको छ नेपालमा । त्यसको प्रमाण हो युनिभर्सल पीस फेडरेशनको भर्खरै सम्पन्न कार्यक्रम । यी हाम्रा आफ्ना मौलिक भाषा, धर्म संस्कृति र सभ्यता मासिनु भनेको हामी पनि सकिनु हो ।
यिनै विषयको बृहत अध्ययन र अनुसन्धान गर्न भनी २०७२ सालदेखि नेपालमा शुरु गरिएको जरो किलो महाअभियान अहिले आएर यसको अपरिहार्यता झन् अझ बढ्दै गएको छ ।
- संयोजक, अमेरिका